အချစ်စစ် ၊ ကိုနွယ်ရိုး နှင့် ZOX – Giant's Web
© 2016. Powered by WordPress. Created by Zox Zin Min	အချစ်စစ် ၊ ကိုနွယ်ရိုး နှင့် ZOX
← တစ်ခါက စာတစ်စောင်From .. Kaung ma lay →
3 comments on “အချစ်စစ် ၊ ကိုနွယ်ရိုး နှင့် ZOX”	NweYoe says:	May 16, 2009 at 9:46 pm	အဟေး…အခုမှမြင်တယ်ဝေး…။ကျေးကျေးဗျိုး …။ သူများဖြေခိုင်း ထားတာ ခုထိဖြေရသေးဘူး ဟီး ကျေးဇူး ဘရာသာ အမှန်တွေပဲဗျို
flowerpoem says:	May 17, 2009 at 11:48 am	Ko Zox အဖြေတွေကို ကျွန်မလက်ခံတယ် အချစ်စစ်ဆိုတာ တကယ်ရှိသလို တကယ်လည်း ခံစားလို့ရပါတယ် ၂ ဖက်စလုံး အပေါ်က အချက်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် တကယ်အချစ်စစ်ရဲ့ အနှစ်သာရကို ပြည့်၂၀၂ ခံစားရမှာဖြစ်ပြီး အချိန်အတိုင်းအတာမလိုအောင်ကို ခိုင်မြဲမှာဖြစ်ပါတယ်
မေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးပြီး စာဖတ်သူတွေကိုမျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ..
kaungkinpyar says:	May 22, 2009 at 8:18 pm	အင်းးးး အမ လာဖတ်တယ်၊ မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေထားတာ ကောင်းပါတယ်၊ အချစ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သဘောတရား ကွဲလွဲနေတဲ့ အတွက် အချစ်နဲ့ပတ်သတ်တာတော့ မရေးသွားတော့ ပါဘူး:)